प्राकृतिक श्रोत र साधनको समुचित उपयोग गरी भौतिक पुर्वाधार र आर्थिक समृद्धि नेपाली जनताको ठुलो इच्छा र चाहना प्रति निश्चित रूपमा नेतृत्व तहबाट कमी कमजोरी भएकै हो ? हाम्रो पुस्ताले नेपाल विकसित मुलकको सूचीमा पुग्ने, दिवाश्वप्न मात्र देखेको हो त ?
हामी सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ, साथै अब पनि नसोच्ने र नसच्चिने हो भने, हामीले भावी पुस्तालाई कस्तो किसिमको संस्कार छोडेर जाँदैछौँ त ? हामी जुन राजनीतिक परिवेशमा हुर्के बढे पनि यस्ता सोच र प्रवृतीलाई आजकै मितीदेखि नत्याग्ने हो भने अन्तत : हामीले अब आउने पुस्ताबाट घृणाको वर्षा वाहेक केहि पाउने छैनौँ । समयले डाँडा काटी सकेको छ ।
यी यावत विषय वस्तुहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेसमा कुन चाहीँ पिँढी होला जो लुकेर बसेको अथवा राजनीतिक चेपुवामा परेर छायाँमा बस्न बाध्य बनाइएको छ ? अब ढिलो नगरौँ र त्यस्ता प्रतिभावान व्यक्तिहरुलाई बत्ति बालेर खोजौँ र नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याउन क्रियाशिल सदस्यहरूले हातेमालो गरौँ । पार्टी भित्रको फुट र पराजय अनि कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरणले थप चुनौती थपिएको छ ।
कम्युनिष्टहरू असफल होलान् र आफुहरू सफल हुनेछौँ भन्ने मानसिकता आज कै मितीबाट त्यागे हुन्छ, किनकी अबको बाटो त्यति सहज छँदै छैन । कम्युनिष्टहरूको हातमा लोकतन्त्र कदापी सुरक्षित हुनै नसक्ने र कम्युनिष्टहरूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नु र बाघलाई शाकाहारी भन्नु उस्तै उस्तै हो । अब हामी आजैदेखी बिपीलाई साक्षी राखी कुनै गुट वा उपगुट बनाउने जस्ता घृणीत खेलमा नलाग्ने प्रण गरौँ र आकर्षक एजेण्डा बनाएर सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई छानौँ । आगामी दिनहरू नेपाली कांग्रेसका लागी अझै कठिन हुने प्रष्ट छ । पहाड भन्दा अग्ला समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नु पर्ने चुनौतीहरु कांग्रेसका माझमा छन ।
क्रियाशिल सदस्यहरुको भूमिका अपार छ, मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट देखि केन्द्रिय नेतृत्वको चयनसम्मको जिम्मेवारी क्रियााशील सदस्यहरूको काँधमा छ । यस्तो महत्वपुर्ण जिम्मेवारीलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेपाल र नेपालीहरूको समस्या प्रति कुनै किसिमको पुर्वाग्रह नराखी आम कार्यकर्ताको भावनालाई ठेस नपुर्‍याउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
कार्यकर्तालाई नजिकबाट बुझ्ने र जाँच्ने हरेक गतिविधिमा साथमा साथ रहने र समग्रमा गुट, उपगुट र व्यक्तिमुखी नभई पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा लानु नै कुशल नेतृत्वको संकेत हो । त्यसैले हाम्रो होईन राम्रो नेतृत्वको चयन गरौँ । तमाम क्रियाशिल साथीहरुको हातमा भएको यो अधिकारको सही उपयोग गरौं र साँच्चैका क्रियाशिल कार्यकर्ताको परिचय दिऔँ। पटक पटक विभिन्न तहमा नेतृत्व गरी सकेकाहरूले पुनः नेतृत्व गर्ने आकांक्षा नराखौँ किनकी, यहाँहरूको क्षमता, योग्यता र मुल्यांकन विगतका दिनहरूमा नै काफी भईसकेको छ ।
समावेशी र समानुपातिक जस्ता आरक्षणका सिटहरु एकाध ब्यक्तिका विशेष पेवा नै बनेका छन् भने गुटका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि यीनै आरक्षणका सिटलाई भाग भण्डा गरेर प्रयोग गरिने दृष्टान्त हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् । यी र यस्ता विकृती र विसंगतिलाई हटाउन कै लागि यो र त्यो को बहानावाजी र नौटंकीको राजनीतिमा फँस्दै नफसौँ। अब त हामीमा पनि योग्यता अनुसार कुशल र उदाहरणीय नेतृत्व प्रदान गर्न तयारीमा हुनुपर्छ । पुनः एकपटक छातीमा हात राखेर गहिरिएर सोचौँ र मनन गरौँ । भावी नेतृत्वको चयन गर्दा क्रियाशिल सदस्यहरू सचेत र सजग भई कसैको लहैलहैमा नलागी आफ्नो विवेकको प्रयोग गरौं ।